Nesorina ny DG-n’ny Jirama : mamikitra ny toerany ny delestazy | NewsMada
Nesorina ny DG-n’ny Jirama : mamikitra ny toerany ny delestazy
Fitondrana tsy mahavaha olana! Matoa esorina amin’ny toerany ny tompon’andraikitra iray, azo antoka fa anisan’ny antony ny tsy fahazoam-bokatra nankinina taminy. Nalana tamin’ny toerany ny tale jeneraly (DG)-n’ny Jirama sy ny filohan’ny filankevi-pitantanana (PCA) ny herinandro lasa teo. Tsy nambara ny antony, saingy iarahan’ny mpanjifa miaina ny delestazy. Nantenaina hivaha telo volana taorian’ny nijoron’ny fanjakana ara-dalàna, nefa vao mainka mahazo vahana sy mamikitra amin’ny toerany, telo taona, aty aoriana.
Nilaza ny tale jeneraly lefitra misahana ny herinaratra, andro vitsy lasa izay (mbola teo ny DG sy ny PCA), fa tsy hisy intsony ny delestazy satria efa vita ny fifampiraharahana amin’ny famatsiana solika ary mihoatra noho ny ilaina aza no hovatsin’ny mpaninjara solika. Andro vitsy taorian’izay, nampitandrina ny Jirama ny minisiteran’ny Tetibola, hanaja ny fepetra mamaritra ny tsena-baro-panjakana. Tsy nisy fanazavana amin’ny antsipiriany raha naato indray ny fifanarahana amin’ireo mpamatsy solika na tsia. Efa nisy ny fanadihadiana anatiny (audit) natao tamin’ny Jirama, ary anisan’ny niakatra tany amin’ny Bianco ny lafiny famatsiana solika.
Fepetran’ny mpamatsy vola
Tranga hafa koa, nanome fe-potoana ny 31 aogositra 2016 ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, analana ny mpitantana ny Jirama, manana antontan-taratasy eny amin’ny Bianco, mialoha ny hivoahan’ny famatsiam-bola 65 tapitrisa dolara, hanarenana ny lafiny herinaratra. Tsy tanteraka izany ary voalaza fa nangatahana ho tamin’ny 31 oktobra 2016 indray, nefa tsy nesorin’ny fitondrana ihany. Tonga teto ny iraky ny Banky iraisam-pirenena ny fiandohan’ny volana novambra 2016, saingy tsy nampahafantarina ny tena anton-diany.
Tampoka teo, tsy fantatra na fifandrifian-javatra fa nesorina tamin’ny toerany, ny tapaky ny janoary teo, ny DG sy ny PCA-n’ny Jirama, taorian’ny tranga tsy fahampian’ny rano intsony eny amin’ny farihin’i Mandroseza, niteraka resabe ho an’ny mpanjifa. Fehiny, tsy mazava intsony na noho ny fepetran’ny mpamatsy vola ny nanalana ireo tompon’andraikitra ireo, fa tsy hamaha ny olan’ny delestazy loatra.